"JESUS DID IT! (Somali Translation)"
Ciise wuu sameeyay! Wax qof kasta oo u baahan inuu ogaado
Ciise wuu sameeyay!
Maxaa KASTA Qofka baahan yahay inuu ogaado
(Riix kor hoosta ka xariiqay inay maqlaan)
S O MAXAY MA HE QABAN ? Ilaah Quduuska ah Kitaabka Quduuska ah wuxuu noo hubinayaa of MAXAY Ciise Masiix MA , iyo SABABTA.
Kitaabka Quduuska ah (IlaahkeliyaWord aamini waayo tartanka aadanaha) waxa uu inoo sheegayaa:All oo naga mid ah waxaa u dhashay dabeecadda dembi ah. Waxaan ka dhaxlayAadan iyo Xaawo - labada qof ee ugu hor abuuray - xadgudubkooda aawadiis (dembiga) si ay Ilaah. Ciise Masiix bixiyo cafis ruuxiga ah qof walba ka iman, Maalintaas Qiyaame by qaadashada cadaabka by dhimanayaan geeri aan naxariis lahayn on iskutallaabta - in macnaheedu waaAADcadaab.
Waa sax! Ciise Masiix waxa uu sameeyey! Ciise bixiyo lacagta madax furashada ah ee aad cafiska weligeed ah - AAD uu cafis FREE KA dhimashada ruuxa weligeed ah IMAN MAALINTA XUKUNKA .
Bal qiyaas isagoo qolka a, iyo xaakinka ayaa kaliya aad dil loogu xukumay dembiga aad geysatay. Sidoo kale qiyaasi Ciise Masiix isagoo qareenkaaga. Ciise Masiix ayaa sheegay in Judge (ama si kale loo dhigo, Ilaaha Aabbaha jannada): "Your Honor, waxaan doonayaa in aan u adeego xukun aan macmiilka iyo bixiso qiimaha for isaga / iyada Daalimiin ah by dhimanayaan halkii si aan macmiilka u tegi kartaa oo lacag la'aan ah ka dambiga uu isagu / iyadu uu galay. "Ma qiyaasi kartaa qof waxaas oo kale kugu sameeyo, waayo, ?! Ciise wuu sameeyay!
Dabcan waxaad laga yaabaa in aad naftaada in sidoo kale la joogo in ku yidhi, waxba ma aanan samayn in lagu xukumay in ay u dhintaan! Waxaan la been eedeeyay! "Ayaa Maxaan la filayo QABTAY, Ilaah ?!" Halkan jawaabtaada ay: Ilaah siiyey 10 amarradayda, waayo, dadka si ay u sii Axdiga Hore Bible. Qof kasta oo jebiya oo keliya mid ka mid ah amarrada kuwa waa in la ciqaabo, waayo, iyagoo ka gees ah Ilaah. Halkee ku odhan IN ?! Wuxu leeyahay in in Romans 6:23: Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada [ weligeed ah dhibaatada waayo, mid dembiyadoodu], laakiinse hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix. Weligaa ma ku been abuurtay? Been oo keliya hal mar? Qof kasta oo inaga mid ah ayaa been ugu yaraan hal mar. Number 9 ka mid ah 10 amarradiisa wuxuu leeyahay, Adigu Waa inaadan la jiifsan (marag been ah). Waad ogtahay waxa na ka dhigaysa? A beenaale caasi ku dembaabaan sharciga moral Ilaah - uu 10 amarradiisa. ( Muujintii 21: 8 sidoo kale waxa uu inoo sheegayaa waxa Ilaah u maleeyo been). Kaliya waxaad ka akhrisan kor ku xusan waxa Ilaah ayaa sheegay in ku saabsan oo samaynaya isaga our caasi jabiyay kaliya ONE oo sharciyada moral: The mushahaarada isagoo sidaas samaynaya waa dhimashada. Dareenka - dhimashada ruuxa. Total kala Ilaah oo ku agmartay qaba, dembiyadayada, waayo, weligiis - mar gebi ahaanba waxba kama jiraan ah wax jacaylka, nabad, rajo, farxad ama dambi dhaaf ka yimid Ilaah (sidoo kale loo yaqaano Jahannamo). LAAKIIN HALKAN WAA NEWS BEST ILAAH! Aabbaha ah oo dembiyadayada naga soo horjeeda dadka kale waxaan ka heli kartaa dhaaf for our caasinnimada (Dambiga) oo dhan ka gees ah Ilaah XAQA NOW iyo wax Yaqiinsan XAQA NOW in Maalinta Qiyaame ah, dembiyadayada AAN lagu qaban inaga gees ah! Intaas waxaa sii dheer, our magacayga ku Baraarku Book of Life waxaa loo qori doonaa (Eeg: Muujintii 20:15 ). SIDA IN NOQON KARAA ?! By weydiinaya Ciise Masiix naga cafi dembiyadayada naga iyo kalsooni ku qabka in uu na iyaga ka mid ah waa cafiyan yihiin si fudud by our la duldhigay iyo aaminaad! Ciise samayn doonaa! 1 Yooxanaa 1: 8-9 leeyahay, Haddaynu nidhaahno, Dembi ma lihin, nafsaddeenna ayaynu khiyaanaynaa, oo runtuna inaguma jirto. Haddii dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan. Sayidka haddii aan ka dhigi Ciise Rabbigeena iyo badbaadiyaheena khaaska ... mar kasta oo aan dembaabo, - waxaan xaq kasta si aad u weydiiso Ciise Masiix naga cafi of our dembiga (s) waxay leeyihiin - inaga nadiifiyo sidii aan marnaba dembaabay - si marka aan qalbigeennu istaago garaaceen, aan la xaqiijin karaa in aynaan yeelan doonaan in ay ku xanuunsado ayaad istusid u weligeed ah, dembiyadayada. Ciise Masiix wuxuu sameeyey wixii ninna kale aadanaha ayaa sameeyey ama weligiis ma uu samayn kareen. Wuxuu ahaa qofka KALIYA meerahaas ayaa marna dembaabay . Oo maxaa yeelay, wuxuu marnaba dembaabay, Isagu waa allabari la aqbali karo oo kaliya Ilaaha Aabbaha ah aqbali doono in ay bixiyaan lacag madax furasho ah, waayo, mid kasta oo dembiyadeenna. Taasi waa si fudud la yaab leh, aan u ?! Laakiinse Ciise wuu sameeyay! WAA MAXAY SABABTA? Sababta oo ah waxa uu Jacaylka dembilayaasha laga badiyay. Ma jiro qof naga mid ah la ogaado marka aan qalbigeennu joojin doonaa garaaca, samaynaa? La Aad lagu dhiirigelinayaa in ay nabad kula Ilaaha Aabbaha ah ka dhigi xagga Ciise Masiix la joogo aad . Duceeya oo ay Ciise u sheegeen aad tahay xumahay oo dembiyadiinna oo ka gees ah Ilaah. Weydiisato inuu idin badbaadiyo oo dembiyadiinna. Daily isaga HORE in wax walba oo aad u malaynayso, sheegeysid iyo aad sameeyneysid. Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, biyo la baabtiisay , oo weydiiso oo ku kalsoon tahay Ciise in aad buuxiso Ruuxa Quduuska ah (oo waxaan idin barayaa sida loo sii joogo ka buuxsamay maalin kasta! ) Si aad u awood lagu siin karaa by Ruuxa Quduuska ah inay ku raaxaystaan akhrinta Kitaabka New Testament (Ilaah LATEST axdiga Word in tartanka aadanaha), iyo amarradayda Ilaaha ayaa diiwaan kuwa raacsan Ciise Masiix inuu adeeco (waa khayr idiin ah - aad waxaa lagu abaal marin, waayo, sidaas samaynaya)!. Ku biir Mu'miniinta kale Christian oo kaa caawin kara jawaabaha su'aalo badan oo aad u badan tahay, iyo kuwa Ilaah ku baryi doonaa, waayo, oo aad dhiiri. Waydiinta Ciise Masiix inuu ahaado qoyskaaga Badbaadiye shakhsi, iyo samaynta isaga Eebaha noloshaada waa GO'AANKA xigmad aad weligaa gaarto. Waxaa idinka soo bixin doonaa abaal farxadeed weligeed ah ... oo haddii Ilaah sidan ku faraxsanahay in aad leedahay noqon doonaa
MA khasaariyey ujeedooyinka weligeed ah Ilaah ayaa la qorsheeyay idiin! Ilaah marnaba idin abuuray in ay Abuur khasaariyey oo - marnaba iloobin in - laakiin waa ilaa AAD si ha isaga ka shaqeeyaan noloshaada - maalin kasta. Wuxuu ma kugu qasbi. Waa in uu had iyo jeer lagu casuumay. (Xiriirka khalqigiisa marna aan xad lahayn soo gaaray qof kale oo aan dadaal,. Ilaah saas mana Waxay u baahan tahay raacdada ACTIVE . Qofka ugu gaar ah ee noloshaada Eebe dooni AAD raacdada firfircoon isaga oo ka badan wax kasta oo kale in aad noloshaada . Wuxuu dooni meel HORE - . ma labaad Oo si aad samaynayso ... QOFNA isagaana u dheeraad ah oo suurad wacan badan aAD wuxuu si hammuun dooni! idiin imid inaan wax sah in , mid qiimo ila runtii ma nolosha Tani waa biloowga oo aad la leedahay.. jecel abuuraha in uu socon doono, waayo, weligiis waara .)
[Fadlan prayerfully noqotay this on qof ku dhici karta in aan maqlay wuxuu Ciise sameeyey iyaga ay ugu talagashay dhimanayaan on iskutallaabta. Si taas loo gudbinayaa qof ku hadla Ingiriiska ama luqad kale, sameeyo makiinada Search Internet ah: CIISE IT MA Index TURJUMAADDA ]
FADLAN nuqul iyo paste " Ciise wuu sameeyay! " SI injiilka dadka la wadaagaan
(Waxaad paste karaa "Ciise wuu sameeyay!" Rogtid oo aad bogga Facebook - saxiixa email - website - blog - video, iwm)
FADLAN KA DHIG KOOBIYO WARQADDA OF "Ciise wuu sameeyay!" Oo waxaan ka dhigi HELI KARO IN KALE Kuwii aan maqlinuna waa xaqiiqadan laga cabsado - TRUST THE Rabbiga SI AAD U SHEEG HABAB hal abuur leh si aad u hesho gacmaha EE DADKA KALE WHO ayaa si cad MAQAL THE WAR WANAAGSAN.
(Samaynta nuqulo in la qaybiyo: Halkan ah . File pdf )
Qof kasta oo aan haysan ee macnaheedu yahay in la daabaco nuqul ka mid ah in ay nuqul ka dhigay in la qaybiyo, waxaan idiin soo diri doonaa nuqul ka mid ah tani Ciise wuu sameeyay! page lagugu soo diro afka aad doorato. Si fudud email noogu soo codsanaya nuqul oo noo soo sheeg luqadda aad u jeclaan lahaa in (Isticmaal Translator Language Google ku yaal bidix ee sare ee boggan si aad noogu sheegto MAXAY LANGUAGE aad rabto in aad nuqul in ay ku sugan.) Hubi in aad na siiso cinwaanka boostada a ah inuu u diro.
Qof kasta oo ku nool Maraykanka gudihiisa in kuwa jeclaan lahaa 50 nuqul oo BILAASH ah ee Ciise wuu sameeyay! in la sameeyo la heli karo dad kale, si fudud email noogu iyaga codsanaya iyo na siiso cinwaanka boostada.
Like Tani Page? U soo dir Friend ah!